Gaadiidka Muqdisho oo saakay shaqadi ka fadhiistay. – Qaranimo Online
You are here: Home 2016 November 29 Gaadiidka Muqdisho oo saakay shaqadi ka fadhiistay.
Gaadiidka Muqdisho oo saakay shaqadi ka fadhiistay.
Posted on November 29, 2016 by Ali Omar Ghedi | 0 Comments
Muqdisho, November 29, 2016: Dadka wada gaadiidka dadweynaha ee magaalada Muqdisho, ayaa saakay waxay ku dhaqaaqeen shaqo joojin kadib markii ay sheegeen in Lacago Xad-dhaaf ah looga qaado Wadooyinka Magaalada Muqdisho qaarkood iyo Lacag kale oo ay ku sheegeen in ay tahay Caymis oo lagu amray Gaadiidleyda in ay bixiyaan, taas oo ah xaaraan.
Qaar kamid ah dadka ku shaqeeya Gaadiidka Dadweynaha oo la hadlay Warbahinta e ayaa sheegay in aysan Awoodin bixinta Lacagta Faraha badan ee lagu soo rogay,waxaana ay sheegeen in ay Go’aan ku gaareen in Shaqada ay joojiyaan, si ay u muujiyaan in laga gardaran-yahay.
Dhanka kale Iskaashatada gaadiidleyda Gobolka Banaadir ayaa sheegay in Saakay ay shaqada joojiyeen ilaa 10 Kun oo ah Gaadiidka BL-ka ah ee ka shaqeeya Magaalada Muqdisho.
Wasaaradda Gaadiidka Xukumadda Soomaaliya weli kama hadlin shaqo Joojinta ay ku dhawaaqeen milkiila-yaasha iyo kuwa kaxeeya Gaadiidka dadweynaha ee ka cabanaya lacagaha qaladka ah ee maalin kasta laga qaado.
Arrintaan waxaa ka dambeeyaan, Maamulka Gobolka Banadir iyo Caymiska lagu magaccabo “TAKAAFUL.” kuwaas oo an wax fikrad ah ka haysanin, habka Caymisyada kala duwan ay u shaqeeyaan.
Sarkaalka hoggaaminayay afgambigi Turkiga oo la magacaabay July 16, 2016
Xil ka qaadista Guddoomiyihii Maxkamadda sare iyo Barlamaanka oo ka Careeysan May 5, 2016
Dhageyso:-Maamulka Hir-Shabeelle Iyo Beeraleyda Balcad Oo Heshiis Kala Saxiixday May 27, 2017
Shir ka socda Nairobi iyo AMISOM oo Faraqa lagu dheganyahay February 9, 2016
Dhagayso:-Xildhibaanada oo kordhinaya la Xisaabtanka Madaxda Qaranka November 20, 2017
Wasiir Xoosh “Muddo yar gudaheed ayaan waxqabad ballaaran oo muuhiim ah ku qabannay” August 24, 2017
Dadweyne ku hor banaan baxay afaafka hore ee Safaaradda Imaaraadka Muqdisho May 30, 2017
Maxamed Cabdi Waare oo ku guuleystey doorashada Madaxweynaha Hirshabeelle September 16, 2017
Guddiga arrimaha dibadda ee barlamaanka oo hambalyo u diray xoghayaha guud ee Jaamacadda Carabta March 13, 2016